Usaziwayo ukhala ngezinhlelo ezingakhi kwiTV
UMETHULI weLove Me or Leave Me kwiHoney TV, uNozibusiso Nyawose, ufuna ukuhamba ezinyathelweni zikaFelicia Mabuza-Suttle Isithombe:SITHUNYELWE
INTOKAZI yaseMandawe, oGwini oluseNIngizimu, uDkt Nozibusiso Nyawose oyiPsychologist eyayibonakala yeluleka ngokomqondo abantu ohlelweni uTatakho, ikhala ngokushoda kwezinhlelo ezakha intsha eziteshini zethelevishini zakuleli. UNozibusiso (31), ongumethuli wohlelo olusha iLove Me or Leave Me kwiHoney TV (DStv 173), uthe izinhlelo eziningi ziveza abantu abamnyama njengengophakimpi namahlongandlebe.
"Akusilo neze iqiniso lokho. Abantu besilisa abamnyama nabo banalo uthando. Inkinga nje ukuthi banezinkinga eziningi ezibahluphayo," kusho lesi singqazu esiwudokotela wengqondo esisebhedlela saseThekwini, iCity Hospital.
Uthe eminyakeni emihlanu ezayo uzibona ehamba ezinyathelweni zamaqhawekazi akhe uFelicia Mabuza-Suttle no-Oprah Winfrey.
"Engikuthanda ngalaba bethuli ukuthi izinhlelo zabo ziyafundisa. Abethuli nje izinhlelo ezingakhi abantu. Nami ngizibona ngisezinhlelweni ezigqugquzela intsha." Uthe naye uyakheka ohlelweni lwakhe iLove Me or Leave Me njengoba vele eseyingoduso. "Kukhona nami engikufundayo ohlelweni nokungakhaya ukuze ngikwazi ukuphatha kahle ubaba," esho maqeda ephela yinsini.
Ugqugquzele abantu ukuba bangaphuthelwa ukubuka iziqephu zeLove Me or Leave Me ngoba zizobe zibakha ngezindlela ezehlukene.
"Uma ubona ukuthi wena nesithandwa sakho senicabanga ukuhlukana. Kulolu hlelo sifundisa izithandani ukuthi izingxabano zingazixazulula kanjani. Nokuthi yiziphi izindlela ezikahle nezinempilo zokuxhumana nomuntu othandana naye." Yize uNozibusiso engakaze waziphupha esebenza kwiTV kodwa uthe iminyango yakhona yavulwa ukuvela kanye kwiNyan Nyan.
"Ngabe sengifonelwa wuBasetsana Khumalo ukuba ngizobamba iqhaza kuTatakho." Ube esesebenza nakuThando Nesithembu njengoba esekwiLove Me or Leave Me. Ubuye wasihlebela nokuthi umatasatasa nolunye futhi uhlelo oluzovela maduze kwiTV. Lesi simomondiya saphothula u-matric eMzinto High maqede sayokwenza iziqu zePsychology e-University of KwaZulu-Natal. Esephetha uNozibusiso uthe umsebenzi wobudokotela nowokwethula izinhlelo uwenza ngempumelelo ngenxa yokuthi usewumuntu omusha onomdlandla nasaphokophelele izinto ezinkulu.